တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃၀)နှစ်မြောက်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနေ့နှင့် (၇၅)နှစ်မြောက် ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့ တပ်မတော်တည်ထောင်သည့်နေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃၀)နှစ်မြောက်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနေ့နှင့် (၇၅)နှစ်မြောက် ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့ တပ်မတော်တည်ထောင်သည့်နေ့အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေော တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနနေံ့နကျ ပိုငျးတှငျ ဗီယကျနမျနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန (K-2000) ၌ ပွုလုပျသညျ့ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၏ (၃၀)နှဈမွောကျအမြိုးသားကာကှယျရေးနနှေ့ငျ့ (၇၅)နှဈ မွောကျ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောတညျထောငျသညျ့နအေ့ခမျးအနားသို့ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ Mr. Nguyen Xuan Phuc ၊ ဒုတိယသမ်မတ Mrs. Dang Thi Ngoc Thinh ၊ အမြိုးသားလှတျတျောဥက်ကဌ H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ၊ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ပါတီအကွီးအကဲမြား၊ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောမှအကွီးအကဲမြား၊ အငွိမျးစားအရာရှိကွီးမြား၊ အာဆီယံ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြား၊ ရုရှားနိုငျငံနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့မှ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျမြား၊ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဖိတျကွားထားသောဧညျ့သညျတျောမြားနှငျ့အတူ တကျရောကျသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံရုံးမှ သံအမတျကွီး ဦးကြျောစိုးဝငျး၊ မွနျမာစဈသံ (ကွညျး၊ ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ အောငျဇယေနြှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားလိုကျပါ၍ ဟနှိုငျးမွို့ရှိ ဗီယကျနမျနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန (K-2000) သို့ ရောကျရှိကွရာ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျော၊ အမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး General Ngo Xuan Lich က ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ ကွိုဆို သညျ။ ထို့နောကျ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောတှငျ အသုံးပွုလကျြရှိသညျ့ ကာကှယျရေး ဆိုငျရာ စဈလကျနကျပစ်စညျးမြား၊ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောမှ ထုတျလုပျထားရှိသညျ့ ကာကှယျရေးပစ်စညျးနှငျ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးမြား ခငျးကငျြးပွသထားမှုမြားကို ကွညျ့ရှု လလေ့ာကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ နိုငျငံအလိုကျ ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့အတူ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၏ (၃၀)နှဈမွောကျ အမြိုးသားကာကှယျရေးနနှေ့ငျ့ (၇၅)နှဈမွောကျ ဗီယကျနမျပွညျသူ့ တပျမတျောတညျထောငျသညျ့နေ့ အခမျးအနားသို့ပါဝငျတကျရောကျပွီး တကျရောကျ လာကွသူမြားနှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးနှုတျဆကျသညျ။ ယငျးနောကျ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံ၏ သမိုငျးကွောငျးအကဉျြး၊ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောပျေါပေါကျလာမှု၊ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြား၊ မိတျဆှနေိုငျငံမြားနှငျ့ လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာမြားတှငျ ပူးတှဲ ဆောငျရှကျနမှေု၊ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားအား Video Clip မြား၊ ဗီယကျနမျတပျမတျောဖြျောဖွရေေးအဖှဲ့၏ တေးသရုပျဖျောအက မြားဖွငျ့ တငျဆကျပွသကွသညျ။
ထို့နောကျ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျလာကွသညျ့ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြား၊ ရုရှားနိုငျငံနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့မှ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျမြားအား တဈဦးခငျြးမိတျဆကျပေးသညျ။ ဗီယကျနမျ ပွညျသူ့တပျမတျော၊ အမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး၊ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ ပါတီမှတာဝနျရှိသူ တဈဦးတို့က (၃၀)နှဈမွောကျ အမြိုးသားကာကှယျရေးနနှေ့ငျ့ (၇၅)နှဈမွောကျ ဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောတညျထောငျသညျ့နအေ့ထိမျးအမှတျ အမှာစကားမြား အသီးသီးပွောကွားခဲ့သညျ။
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (K-2000) ၌ ပြုလုပ်သည့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃၀)နှစ်မြောက်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနေ့နှင့် (၇၅)နှစ် မြောက် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်တည်ထောင်သည့်နေ့အခမ်းအနားသို့ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc ၊ ဒုတိယသမ္မတ Mrs. Dang Thi Ngoc Thinh ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ၊ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့နှင့်ပါတီအကြီးအကဲများ၊ ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်မှအကြီးအကဲများ၊ အငြိမ်းစားအရာရှိကြီးများ၊ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များနှင့်အတူ တက်ရောက်သည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်း၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ဇေယျနှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (K-2000) သို့ ရောက်ရှိကြရာ ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး General Ngo Xuan Lich က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို သည်။ ထို့နောက် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ၊ ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်မှ ထုတ်လုပ်ထားရှိသည့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသထားမှုများကို ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃၀)နှစ်မြောက် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနေ့နှင့် (၇၅)နှစ်မြောက် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့ တပ်မတော်တည်ထောင်သည့်နေ့ အခမ်းအနားသို့ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး တက်ရောက် လာကြသူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။ ယင်းနောက် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း၊ ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာမှု၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာများတွင် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား Video Clip များ၊ ဗီယက်နမ်တပ်မတော်ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့၏ တေးသရုပ်ဖော်အက များဖြင့် တင်ဆက်ပြသကြသည်။
ထို့နောက် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့တပ်မတော်၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပါတီမှတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးတို့က (၃၀)နှစ်မြောက် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနေ့နှင့် (၇၅)နှစ်မြောက် ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်တည်ထောင်သည့်နေ့အထိမ်းအမှတ် အမှာစကားများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံ သံရုံး၊ စစ်သံရုံးမိသားစုများနှင့် ပညာတော်သင် သင်တန်းသားများအားတွေ့ဆုံ